Cilad ku jirta Vivo NEX waxay keentaa kaamirada lagala soo bixi karo inay shaqeyso digniin la'aan | Androidsis
Dhawaan Vivo ayaa bilaabay Waxaan ku noolahay NEX, heer sare ah oo leh kamarad dib looga noqon karo taas oo meesha ka saartay baahidii ay u qabeen shirkadu inay hirgaliso nashqadaynta caanka ah ee ku soo kordhaysa suuqyada casriga ah ee casriga ah, si ay noo siiso guddi hore oo shaashad ah oo fadhiya ku dhowaad dhammaan goobahooda. Kaamiradu waxay u soo baxdaa inay shaqadeeda qabato markasta oo codsi rukhsad u baahan uu u baahdo.
Sida ay wararka qaar sheegayaan, arrin la xiriirta kamaradda taleefanka ayaa keeneysa kaamirada hore ee Vivo NEX inay soo muuqato xitaa marka isticmaale uusan sameynin tallaabo noocaas ah. Tani waxay dhacdaa markii la furayo daaqad lagu wada hadlo Telegram. Isticmaalayaasha kale sidoo kale waxay ka cabanayaan isla qalad markii ay isticmaalayaan Tencent's QQ browser iyo barnaamijka Ctrip.
Muuqaal qaladkan laga duubay ayaa qof isticmaale ah soo dhigay Weibo, oo ah shabakada bulshada ee Shiinaha, taas oo muujineysa kamaradda hore ayaa soo baxda iyada oo aan wax ficil ah oo ku habboon isticmaalaha inta aad isticmaalayso barnaamijka fariinta ee Telegram-ka si caadi ah. Markuu adeegsaduhu furo barnaamijka Telegram oo uu aado farriin Cusub, ka dibna uu gujiyo xiriir si uu u furo sheeko cusub, kaamiradu isla markiiba way baxaysaa. Waxay dib ugu noqotaa dhuumashada mar haddii isticmaaluhu ka baxo barnaamijka.
Dhinaca kale, Tencent, bayaan ay soo saartay, waxay ku sheegtay in kasta oo biraawsarka QQ uu dhaqaajiyo kamaradda sawir qaadashada, haddana waxba kama duuban. Tencent ayaa ku eedeyneysa kamaraddii yareyd ee API-yada arintan. Waxay sheeganeysaa in API-ku uu kiciyay sababo la xiriira dabeecadda iskaanka ee biraawsarka QR code, laakiin taasi waa inaysan dhicin. Tan awgeed, afhayeenku wuxuu Vivo waxay sheegaysaa in shirkaddu ay ku wargelisay kooxda farsamada dhibaatooyinkaas oo dhan iyo inay dhowaan bixin doonto cusbooneysiin lagu xalliyo arrimahan.
Vivo NEX waxaa dhawaan laga bilaabay Shiinaha laba ikhtiyaar oo midab leh: Diamond Black (madow) iyo Ruby Red (casaan). Taleefankan casriga ah ayaa sidoo kale ka bilaabi doona dalka Hindiya bisha Luulyo 19keeda iyo Vivo waxay horeyba ugu dirtay warbaahinta casuumaad munaasabada. Si kastaba ha noqotee, weli lama oga in shirkaddu qorsheyneyso inay soo bandhigto dhammaan noocyada Vivo NEX ee waddankan. Maxaa intaa ka badan, hannaanka caalamiga ah ee qalabkan ayaa la qorsheynayaa, waana sababta ugu dhaqsiyaha badan looga heli karo dalal kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Cilad ku jirta Vivo NEX waxay sababtaa kaamirada lagalaaban karo inay shaqeyso digniin la'aan